ISebe Lokubhala, eU.S.A.
Ukuze sikwazi ukwenza konke okusemandleni ethu ukuvakalisa “iindaba ezilungileyo” “kuzo zonke iintlanga nezizwe neelwimi nabantu,” sivelisa uncwadi ngeelwimi ezingaphezu kwama-750. (ISityhilelo 14:6) Siwuphumeza njani lo msebenzi? Sincedwa liqela lababhali abakwizizwe ngezizwe kunye nabaguquleli abazinikeleyo—bonke ngamaNgqina kaYehova.
Ababhali basebenzisa isiNgesi. IQumrhu Elilawulayo livelela umsebenzi weSebe Lokubhala kwikomkhulu lethu lehlabathi. Eli sebe longamela izabelo zababhali abakwikomkhulu nakwiiofisi ezithile zesebe. Ngenxa yokuba sinababhali abaphuma kwiintlanga ezahlukahlukeneyo siyakwazi ukuthetha ngemibandela ephathelele izithethe ezahlukahlukeneyo yaye ngenxa yoko iimpapasho zethu zibangel’ umdla kubantu beentlanga zonke.
Emva kokuba bebhalile bathumela kubaguquleli. Emva kokuba umbandela uhleliwe, uthunyelwa ngekhompyutha kumaqela abaguquleli abasehlabathini lonke ukuze bawuguqulele, bawuhlole baze bawufunde. Bazama ukukhetha “amazwi achanileyo enyaniso” ukuze babhale kanye oko kuthethwa sisiNgesi ngolwimi lwabo.—INtshumayeli 12:10.
Iikhompyutha ziyawukhawulezisa umsebenzi. Ikhompyutha ayikwazi ukuba ngumbhali nomguquleli. Sekunjalo, umsebenzi wababhali nabaguquleli unokukhawuleza ngakumbi xa besebenzisa izichazi-magama nophando olukwikhompyutha. AmaNgqina kaYehova enza iMultilanguage Electronic Publishing System (MEPS) apho umbandela unokufakwa ngeelwimi ezininzi, udityaniswe nemifanekiso yawo, uze uprintwe.
Kutheni sisenza yonke le migudu nakubeni ezinye iilwimi zithethwa ngabantu abambalwa? Kungenxa yokuba uYehova uthanda ukuba “zonke iintlobo zabantu zisindiswe zize zifikelele elwazini oluchanileyo lwenyaniso.”—1 Timoti 2:3, 4.
Zibhalwa njani iimpapasho zethu?
Kutheni iimpapasho zethu siziguqulela kwiilwimi ezininzi kangaka?
Funda ngeengxaki eziye zakho xa bekuguqulelwa amazwi eengoma kwiilwimi ezininzi.